Myanmar – Premium – Tha Din
Myanmar - Premium
Kabyar, Tha Din February 11, 2022
မျက်ရည်နဲ့ပွင့်ခဲ့တဲ့စိန်ပန်းနီနီတွေကို “အာဇာနည်”လို့ကင်ပွန်းတပ်မယ် သပြေခက်တို့ဝေတဲ့နွေဦးဟာ ရာဇဝင်မရိုင်းအောင်သမိုင်းကြောင်းလှခဲ့ကြ မေတ္တာတရားတွေကတော်လှန်ရေးရဲ့ဆုလာဒ်ဆိုရင် လေပွေရူးကြောင့်ကြွေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေအတွက်ရော ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိပါသလဲ… မထွေးနိုင်မအန်နိုင်အောင်များပြားလွန်းတဲ့ အဓမ္မသွတ်သွင်းတဲ့မုသာဝါဒ‌တွေက တချို့‌တွေအတွက်‌တော့နတ်သုဒ္ဓါအလားချိုမြိန်သတဲ့ လှောင်ပြောင်ကြစမ်းပါစေလေ… ယုံကြည်ရာကိုလျှောက်မိမှတော့ ဘယ်သူမှနောက်ဆံမတင်းစတမ်းပေါ့ မချောမွေ့ပေမယ့်‌ဖြောင့်တန်းတဲ့ ငယ်ရွယ်သူတွေဖောက်တဲ့လမ်း “နိုင်ကိုနိုင်ရမယ့်ပွဲ”လို့ကြွေးကြော်ရင်း သူတို့စိန်ခေါ်ခဲ့တာမို့...
Kabyar, Tha Din November 11, 2021
ဒီနွေဦးရောက်ရင် ငါတို့မိသားစုအညာပြန်မလို့ ငါ့အဖေကအသက်ကြီးပြီ သူမျက်စိမမှိတ်ခင် အညာကိုအလည်ပြန်ချင်နေတယ် . အမေကသူ့ယောင်းမတွေနဲ့ သနပ်ခါးနဲ့ကြက်သွန်‌ဈေးအကြောင်း စကားစမြည်ပြောမလို့ ငါ့အစ်ကိုတွေက ကျောက်ကာဓားတွေဝယ်ကြမယ် ထန်းရည်နဲ့ပဲခြမ်းသုတ်တွေမြည်းကြလိမ့်မယ် . ငါတို့မိသားစု တမာနဲ့နောက်ချေးသင်းတဲ့လေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်ရှုကြမလို့ မိုးညှင်းသံဗုဒ္ဓေဖူးကြမလို့ ...
ကဗျာမဟုတ်တဲ့ကဗျာလေးတွေ ရေးသူမရှိတဲ့ ကဗျာလေးတွေ ကဗျာထက်အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ကဗျာလေးတွေ ကောင်းကို ပျံတက်သွားတဲ့ကဗျာလေးတွေ ဆက်လက်ရှင်သန်နေတဲ့ ကဗျာလေးတွေ နောက်ထပ်ပေါက်ဖွားလာမယ့်ကဗျာလေးတွေ ကဗျာဖြစ်ချင်ပေမယ့် ကာရန်မညီလို့ ကဗျာဖြစ်ခွင့်မရတဲ့ ကဗျာလေးတွေ ကဗျာတွေအားလုံးရဲ့ တက်ကြွမှုကြောင့် ကဗျာဆရာရဲ့ကလောင် ငယ်မူငယ်သွေးပြန်နေရပြီ။...
“မေမေ သားဗိုက်ဆာတယ်” “နေပါဦးသားရယ် မင်းဖေဖေ ပြန်လာတော့မှာပါ” “ဖေဖေပြန်လာရင်မုန့်တွေပါလာမှာလားဟင်” “ဒါပေါ့သားရယ်” “ဟုတ်အဲ့တာဆိုသားဆော့ရင်းစောင့်နေမယ်ဖေဖေပြန်လာမှမုန့်စားပြီးအိပ်မှာ” အချိန်ကား ည ၈နာရီ ၂၀ မြနွယ်တစ်ယောက် သားဖို့မုန့်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတဲ့ လင်ယောကျာ်းကိုမျှော်ရင်းစိတ်ပူမိတာတော့အမှန် နိုင်ငံရေးမကောင်းသည့်ကြားက သားဖြစ်သူကိုချစ်သည့်ဇောနဲ့ထွက်သွားသေးသည် မိုးကလည်းရွာနေငါ့ယောကျာ်းအဆင်မှပြေပါ့မလား...
မြေပေါ်ဝေနေတဲ့ ကြယ်တွေက ငါတို့ အနာဂတ်ရဲ့ လမ်းပြကြယ်များသာ လူကို လူလို အမြတ်တနိုးထားတတ်တဲ့ ငါ့တို့သွေးသားနောင်ရင်းလေးတွေ၂၁ရဲ့ အနာဂါတ်ကို လမ်းပြပြီး မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် သမိုင်းမှာ အားကျ ဂုဏ်ယူရမယ့် ဖက်ဆစ်ကိုတော်လှန်မယ့် အောင်ဆန်းစိတ်ဓာတ်နဲ့...
နွေဦးရေလေရူးနဲ့အတူကူကာဖေးလို့တို့ပြည်သူကိုညစ်တဲ့စစ်ရူးတသိုက်ကိုဟို စကြဝဠာအပြင်နှင်ထုတ်လိုက်ကြ….။ .နွေဦးရေမြေခကြွေခဲ့ဝေရွက်တွေအတွက်တသက်မမေ့ဘူးလေပြေကြားကသတင်းစကားပါးလိုက်ပါရစေ…..။ .နွေဦးရေအထူးအောင်ပွဲငါတို့နွှဲမယ်ရဲရင့်ပြည်သူကမ်းလက်တူနဲ့ယူဆောင်ကြမည်ဒီမိုကရေစီ။…..။ .မိုးစက်ပန်း ၂၁.၂.၂၁
နွေဦးမှာအနာဂတ်တွေပျောက်ရှခဲ့ပြီးတပေါင်းတန်ခူးမှာသွေးစွန်းခဲ့တဲ့ငါတို့မြေ .မိုးဦးမှာတော့သူရဲကောင်းရဲ့သွေးစွန်းထင်းခဲ့ရတဲ့ငါတို့မြို့လေး .ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့အနာဂတ်ကြယ်လေးတွေအတွက်တော့ဆောင်းဦးမှာကြွေးကုန်တောင်းမယ်သွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိ……. CCS
မင်း နဲ့ ငါတို့
▪️ နောက်ဆုံးအဆုံးအဖြတ်နေ့ကို မရောက်ခင် အနိုင်အရှုံးမပေါ်သေးပေ… . ▪️ ငါတို့အသက်ကို နှုတ်ယူလို့ရပါစေဦး စိတ်ဝိညာဥ်တွေက သေဆုံးမသွားပေ… . ▪️ မတရားမှုကို ကိုးကွယ်နေတဲ့ မင်းနဲ့ အမှန်တရားကို ဆာလောင်နေတဲ့...
ကျွန်တော်တို့ဟာ မိုးရေစက်လေးတွေပါ ဒါပေမဲ့ ရေကန်ကြီး ရေပြည့်ဖို့ ကျွန်တော်တို့အားတွေ လိုတယ်မလား .ကျွန်တော်တို့ဟာ သဲပွင့်လေးတွေပါ ဒါပေမဲ့ အဆောက်အအုံကြီး ဖြစ်လာဖို့ ကျွန်တော်တို့အားတွေ လိုတယ်မလား .ကျွန်တော် တို့ဟာ clicker...
တိမ်ပြာတွေ သာတဲ့နေ့တွေ ငါတို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတယ်…။ . ညညဆို အတားအဆီးမဲ့ကောင်းကင်အောက် ငါတို့လက်တွဲလျှောက်ဖူးတယ်နော်…။ . နင်က အနက်ဆို ငါကဖြူခဲ့ပေမယ့် ဒီနွေဦးမှာတော့ ငါတို့နှစ်ယောက်လုံး တူညီစွာ ရဲရင့်နီစွေးခဲ့ကြတယ်…။ . ငါကသံပုံးတီးတော့...